Tag: mepụta ihe omuma ihe | Martech Zone
Tag: mepụta ihe omuma ihe
Ngosi: Ike nke Infographics
Satọde, Febụwarị 25, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Muhammad Yasin emepeela ihe ngosi di omimi ma omimi banyere ike na atumatu nke okike ihe omuma, nkesa na nkwalite. Anyị ekwuola gbasara infographics dị ntakịrị na Martech na ụlọ ọrụ anyị na-emepe ma na -emepụta ihe ọmụma ọhụụ karịa ka ọ dịbu. Gịnị mere ha ji ewu ewu? Ebumnuche dị mfe bụ na infographics nwere nchikota nke ịbụ ndị mara mma, ndị na-ebugharị ma na-agbari ngwa ngwa. Rịba ama na ekwughị m eziokwu? Nke ahụ bụ n'ihi na echeghị m nzube ahụ
Fọdụ Na-enyocha ọchị… Ngaji na eriri
Tọzdee, Disemba 20, 2007 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Site na enyi, Bob Carlson, na HealthX: Ihe nkuzi na - adịghị agafe agafe banyere otu ndị ndụmọdụ ga - esi mee ihe dị iche na nzukọ. Izu gara aga, anyị kpọpụrụ ụfọdụ ndị enyi n'ụlọ oriri na ọ newụ newụ ọhụrụ, ma chọpụta na onye na-elekọta anyị nke were iwu anyị were ngaji na uwe elu uwe ya. O yiri obere iju. Mgbe busboy wetara mmiri na arịa anyị, achọpụtara m na o nwekwara ngaji na uwe uwe elu ya. M wee legharịa anya hụ